I-CELUM Phambili kuLawulo lweeAsethi zeDijithali | Martech Zone
I-CELUM iqhubela phambili uLawulo lweeAsethi zeDijithali
NgoLwesine, Meyi 5, 2016 NgoLwesine, Meyi 5, 2016 Douglas Karr
Sibhale malunga nenjongo ye Management Asset Digital iinkqubo kunye nokukwazi kwabo ukunceda ukukhusela uphawu kunye nemiyalezo, ukubonelela ngenjini yokukhangela ukufumana umxholo, kunye neendlela zokuguqula iintlobo zeendaba ukuze zisetyenziswe ngeendlela ezahlukeneyo. Abathengisi abaphambili basebenzise iinkqubo zokujonga ulungelelwaniso lokuthengisa kunye nentengiso kunye nokusebenza ngokuthengisa.
Ngelixa ezinye iinkqubo ze-DAM ikakhulu ziyinkqubo yefayile ezukisiweyo engaziphuculi kakuhle iinkqubo, CELUM Yakhelwe ukuba ibe liziko eliphambili lomxholo. Iyakwazi ukwenza ngokungathi yi-ERP yakho, i-CRM, i-PIM okanye inkqubo yolawulo lomxholo kwiwebhu kwaye ivumela ukuhanjiswa komxholo ngokuthe ngqo kwiindlela ezininzi.
Iqonga livumela iibrand ukuba Uyile iphepha labo lokungena, idashboard kunye nendawo yokusebenza -jongeka kubasebenzisi bangaphakathi nabangaphandle. Iiprofayili ezahlukeneyo zomdibaniso zilawulwa ngoyilo oluqhelekileyo, olunokuthi lwenzelwe amaqela ahlukeneyo abasebenzisi besebenzisa iNkqubo yoLawulo loCwangciso (CMA).
CELUM ukhuphe a umphathi wesilayidi omtsha weofisi.connect kunye PowerPoint®. Inkqubo inokufaka ngokuthe ngqo izilayidi komnye okanye kwimiboniso emininzi kwintetho yangoku. Izilayidi ezininzi ezivela kwimiboniso eyahlukeneyo zinokukhethwa ngaxeshanye kwaye zifakwe kwintetho. Umsebenzisi unolwazi kuzo zonke iinguqu ezenziwe kwintetho ehleliweyo kunye nokufikelela kwinkcazo ekhutshiweyo kunokuthintelwa.
Iimpawu zoLawulo lweeAsethi zeCELUM zeCELUM:
Ukulayisha ngokulula kunye nokukhangela -Khuphela ngokulula-ungatshatanga, ibhetshi okanye ulayisho oludityaniswe ngokupheleleyo. Fumana iiasethi zakho ngokongeza iiwijethi zokukhangela.
Ukuhamba komsebenzi ngobuchule -Zenzekelayo kwaye ulandele iinkqubo zokuyila ngemisebenzi kunye nolawulo lwenguqulo.
Linganisa impumelelo -Bona ukuba yeyiphi imixholo esebenze kakuhle kweliphi ijelo-iindlela zokuziqhelanisa ngokuhlalutya ukuthanda kunye nokwabelana ngomxholo othile.
Ulawulo lwamalungelo oluzenzekelayo -Ukulawula ukusetyenziswa kwamalungelo, khusela iilayisensi, kwaye uqiniseke ukuba ukusetyenziswa gwenxa kuyafunyanwa kwaye kuthintelwe.
Hlanganisa kwaye uhlangule -Yila kwaye uhambise ingqokelela kubaphulaphuli abohlukeneyo ngokukhusela ukukhusela umxholo ontununtunu.
Lawula naluphi na uhlobo lwefayile -Ukulawula naluphi na uhlobo lwefayile kunye nokufumana amandla njengokukhutshwa kwemethadatha, ukuguqula kunye nokujonga kwangaphambili kwewebhu ngaphezulu kweefomathi zeefayile ezingama-200
Hambisa kwezinye iinkqubo -Nawuphi na umxholo kuyo nayiphi na inkqubo-elungiselelwe uthungelwano lokuhambisa umxholo kunye nezixhobo. I-CELUM inokudityaniswa kuyo nayiphi na inkqubo ngokusebenzisa ii-API zayo ezinamandla.
Lawula ukufikelela -Enye yeendlela zokulawula amalungelo zokufikelela kumashishini okulawula umxholo. Iimvume eziqhutywa kwilifa zenza ukuba iinkqubo zokuvunywa okuntsonkothileyo kube lula ngokungenakuthelekiswa nanto.
Imidiya yoluntu kunye nomxholo -Umanyaniso kunye nomlinganiso wempumelelo
Khuphela i-CELUM's Whitepaper: Kutheni iShishini lakho lifuna i-DAM
tags: ulawulo lwebhantiizixhobo zentsimbiCelumisicelo solawulo loqwalaseloidamaUlawulo lwee-asethi zedijithaliifom yefayileunxibelelwanoipower Pointizilayidi zombane
Ngawaphi awona mabhaso aDumileyo kwiiNdawo zakho zoKwazisa ngoKwazisa?